GetProspect: Tsvaga B2B Email Kero uye Manage Prospect Lists | Martech Zone
GetProspect: Tsvaga B2B Email Kero uye Manage Prospect Lists
NeChishanu, Gumiguru 2, 2020 NeChishanu, Gumiguru 9, 2020 Douglas Karr
Kunyangwe ini ndisingade kupazwa, ndinofanira kubvuma kuti pane nguva apo vanhu vakawana email kero yangu ndokundibata kuti ndiite bhizinesi repamutemo. Muchokwadi, ini ndakatonyora vashoma makontrakta uye ndikatenga mashoma mapuratifomu kubva kune aya asina kukumbirwa maemail anotumirwa kwandiri.
Izvo zvakati, ini ndinotarisira modicum yekuremekedza mune aya kutaurirana:
tsvakurudzo - Ini ndoda kuziva kuti ini ndakasarudzika zvakasarudzika kune chimwe chinangwa.
Personalization - Ndinoda kuti munhu wacho andizivise chaizvo kuti chaive chii chinangwa uye kutarisira kwavo.
Buda-kunze - Ndiri kuda nzira yekubuda mukukumbira uye usazombogamuchira imwe email kana isingashande.
GetProspect Email Tsvaga
Munguva yakapfuura, iniwo ndakaita iyo (kufema) isingafungidzike uye akatenga akawanda email zvinyorwa. Iyo indasitiri inoyevedza chaizvo, zvakadaro, saka mikana yako yekukuvadza zita rako uye kuvharwa nemutengesi wako weemail yakakwira. Kana iwe ukaita izvi, iwe zvirinani kumhanyisa runyorwa kuburikidza neemail huchenjeri chishandiso kuti uve nechokwadi chekuti hausi kuendesa spam musungo maemail uye emaemail ayo anozobhuroka.
GetProspect iri kutsvagisa kuunganidzwa kwe e kero inosanganiswa neinjini yeinjiniya inochengeta zvinyorwa kusvika pari zvino. Ingoisa zvako zvaunotsvaga uye yedu yeemail extractor inopa runyorwa rwemazita ane maemail emakambani, chinzvimbo, LinkedIn profile URL, zita rekambani, indasitiri, webhusaiti, uye zvimwe zvakawanda!
GetProspect inopa yakakura interface kupinza, kutsvaga, kusefa, kuronga, uye kutumira zvaunotarisira.
GetProspect Prospect Management Zvimiro Zvinosanganisira:
Lists - Batanidza ma profiles ako akaburitswa muzvinyorwa. Raira nezita, kambani, chinzvimbo, nezvimwe.
Kubatanidzwa - Tenga kana kutumira zvaunotarisira kune anopfuura mazana manomwe maapplication anosanganisira Linkedin, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Mailchimp, Mailgun, uye G Suite.
chikwata - Unogona kukoka timu yako kuti igovane chirongwa chako kuti ubatsire kuwana tarisiro nekukurumidza.
Export kune Excel - Export yakawana mafoni kuXLS faira ine maemail akaburitswa uye rumwe ruzivo.
Bulk Kunze - Tsvaga runyorwa rweemail kamwechete. Ingo tumisa mafaira ane mazita uye ruzivo rwekambani uye uwane maemail akawanda.
Company Info - Tsvaga ruzivo rwakakosha senge webhusaiti yekambani, kero yepanyama uye nhamba yefoni, saizi yekambani, nhamba yevashandi, nezvimwe.
Saina Uye Uwane mazana maviri emaEndaneti Mahara
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye GetProspect - shandisa kodhi 6rE12 kuti ugone kuwana mazana maviri emaimeri kero dzeemail!
Tags: b2btsvaga email kerotsvaga email kerotora email kero kubva kuinongedingetprospectgsuiteLinkedInsalesforce
Freshmarketer: Ongorora, Bvunzo, uye Gadzirisa neiyi Shanduko Optimization Suite